U-EMMA ELISE KAMGANG, Umbhali e-T michoro RELAY
EMMA ELISE KAMGANG 25 izikhala 0 amazwana
Icala lika-Ernest Obama: "U-Amougou Belinga kumele angabi nesihluku futhi aqine", ucabanga…
Ukholelwa ukuthi ngale ndlela kuphela lapho usomabhizinisi ezokwazi ukuvikela izinkampani zakhe emizamweni emibi. Ukuphendula kuyaphindaphindeka mayelana nokubuzwa kwe…
I-Paris La Défense Arena: "I-Reprogram Celine Dion noma i-Iron Maiden ngumdlalo wesikebhe ...
U-Emmanuel Obama: ozalwa esihogweni sengane esaphazwe ngokweqile.
Ukuxoshwa kuka-Ernest Obama esikhundleni sokuhlonishwa kwemenenja ejwayelekile yesiteshi sethelevishini esinabantu abazimele, iVision 4, kuyaqhubeka nokufisa ukugcwala umhlaba. Akukho lutho olwalufanekisela lo mhlobiso ongajwayelekile kulo Juni 18 endlunkulu ...
U-Amougou Belinga wenqaba ukuthethelela u-Ernest Obama
Izindaba ze-Cameroonia zivela engile d Isikhulu esiphezulu seqembu le-L'Anecdote uJean-Pierre Amougou Belinga uhlose ukuqhubeka nesenzo sezomthetho, asilethe manje ...
ECameroon - Icala lika-Ernest Obama: "Ama-dinosaurs" e-Vision 4 "abethela u-Ernest ...
Lo msombuluko ngoJuni 22, 2020, ohlelweni lolu hlelo, udwebe owayengumphathi-jikelele we-Vision 4 chain udliwe eluhlaza. Ukuhlaselwa kwalowo owayenguMqondisi Jikelele weVision4, u-Ernest Obama, kuyaqhubeka emoyeni ...
UTrump usayina isimemezelo sokuguqulwa kwamaphoyisa
Ngemuva kwemibhikisho eyingqophamlando eyalandela ukubulawa kukaGeorge Floyd wase-Afrika, uDonald Trump wasayina isimemezelo ngoLwesibili okuhloswe ngaso ukubhekana nesihluku samaphoyisa. Abakholelwa kuhulumeni kanye nezishoshovu ezifuna…
ICoronavirus: IChina ithola Amacala Amasha e-Covid-19 endaweni yaseBeijing
I-China, lapho i-Covid-19 yaqala ukubonakala khona ngasekupheleni kuka-2019, ibone ukuvela kabusha kwesibalo sezimpikiswano ezinsukwini ezisanda kwedlula, ezigxile emakethe enkulu yaseXinfadi eningizimu yedolobha. Amacala amasha ayikhulu abe…
Yimuphi umlingisi uVanessa Paradis amthatha esikhundleni se-Girls 'Underskirts?
I-W9 isakaza amahlaya athi "Sous Les Jupes des Filles" namhlanje kusihlwa ngo-21: 05 pm noVanessa Paradis, othathe indawo yomunye umlingisi ngokushesha. Umlingisi obonwe kuTellement Proches futhi wamukelekile, u-Audrey Dana uya ngemuva kwekhamera ngo-2014…
Udlame lwasekhaya: Ukwanda kobumbano kuMariam Sow, i…
IBooba ilwa ne-albhamu entsha kaDamso
Okwangaphambilini Olandelayo 1 kwezingu-34